Ah Nge Unplugged)
Uploaded by Pyi Pai Phyoe
EတးEရး - Eသ်ာဒီE၀
EတးဆIU - Aငဲ
Intro:G ( F C G ) 2
E၀ဒနာAသIနဲ့ ဒီလIUငါဟာ ရင်ခUန်Eနဆဲ
ဘယ်AချIန် ပြီးဆံUးသွားမယ်ဆIUတာ မသIခဲ့တဲ့ သီချင်းEလး
သင်ခန်းစာ AEဟာင်းEတွလည်း သစ်ဆဲ
AမUန်း နဲ့ Aချစ်မှာ ဘ၀ကIUစစ်Eဆး
AမှားEတွရIှရင် ခွင့်လွှတ်EပးပါEဟ့ စာနာပါ ကIUယ့်ရဲ့ Aချစ်Eလး
ဘUရားသခင်ဆီမှာ တမ်းတရင်း ရင်ထဲဒီမျက်ရည်စက်များ
နူးညံ့Eသာ မင်းAချစ်များဟာလည်း Eသာ့ခတ်ထား
[ Aချစ်ဟာ ခါး… ခါး…ခါး Aချစ်ဟာ ခါးလွန်းတယ်Eဟ့
( ရင်မှာ ခါးသီးတယ်Eဟ့ )
လမင်းရဲ့ AရIပ်EAာက်မှာ Eတွးရင်း
ရင်မှာ နာကျင်တယ် ကIUယ့်ရဲ့ Aချစ်Eလး ]
++ Eကာင်းကင်ကြီးတစ်ခU Eပျာက်Eနခဲ့တာ ငါလIUချင်တယ်
ငIUEနသူရင်ထဲ EAးEAာင် ငြIမ်းသတ် Aပြင်းဆံUးEသာ မီးEတာက်များ
Repeat + & +
Solo: ( F C G )3 F C Eb G
Aချစ်ဟာ ခါး… ခါး…ခါး Aချစ်ဟာ ခါး
Aချစ်ဟာ ခါး… ခါး…ခါး Aချစ်Eရ ခါး… ခါး…ခါး… ခါး… ခါး…ခါး
[Aချစ်ဟာ/Eတွ ခါး… ခါး…ခါး Aချစ်ဟာ/Eတွ ခါး]၄
Aချစ်ဟာ ခါး… ခါး…ခါး … Fine
D E D B Bb A G A ငါ့Aချစ်မျိုးလည်း မင်းရှာကြည့်စမ်းဟေ့ ငါ့လိုနောက်ထပ်မရှိ ရင်မှာ ပုဒ်သိုးမသွားခင် လှမ်းယူလိုက်တော့ဟေ့ လွတ်လပ်စွာ ၀ဲခဲ့ ငါရဲ့ ချစ်ကမ္ဘာ Aိုဟောင်း ကမ်းမရှိတဲ့ Aချစ်နဲ့ ငါရဲ့နှလုံးသား မင်းတိုက်စားလိုက်Uီး Aလွမ်းတွေပူပြင်းတယ် မီးလား Aချစ်တွေဟာဆိုးလွန်း ကမ်းမရှိတဲ့Aချစ်နဲ့ ငါ့နှစ်လုံးသား G D G D G DDAC A ပေးထားမယ် ပေးထားမယ် ပေးထားခဲ့မယ် Fine. .ကမ်းမရIှတဲ့ Aချစ် EတးEရး-နIUင်းနUIင် EတးဆIU-Aငဲ Key: A + A မင်းလေးစU်းစားစမ်း Aချစ်လေး ညတိုင်း ကိုယ်မက်တဲ့ ဒီAချစ်Aိပ်မက် ဒီရင်မှာကြည့်လိုက် ချစ်လိုက်ဟေ့ A ++ မျက်လွှာလေးကို မချနဲ့ Aကြည့်တွေ သိပ်လှလို့ E မင်းမျက်လုံးကြောင့် ရူးခဲ့ ငါကြင်နာနေမယ် မတားနဲ့တော့ A Aချစ်တွေ မင်းကိုငါပေးမယ် လှမ်းယူလိုက်တော့ဟေ့ ချစ်ခဲ့ခြင်းဟာ ငါ့Aတွက် ၀ိုင်လို ရီဝေရင်မှာ Aဆိတ်တက်ခဲ့ X + X + G D A G D A လွတ်လပ်စွာ ၀ဲခဲ့ ငါရဲ့ ချစ်ကမ္ဘာ Aိုဟောင်း A D A G D E ကမ်းမရှိတဲ့ Aချစ်နဲ့ ငါရဲ့နှလုံးသား မင်းတိုက်စားလိုက်Uီး A A Aချစ်များကို လှမ်းယူUီး ငါ့Aချစ်များ လှမ်းယူUီး A မင်းကိုAနမ်းတွေပေးမယ် Aချစ်တွေလှပဖို့ မင်းနဲ့ချစ်ခဲ့ခြင်းရဲ့ ညတစ်ည လိုချင်တယ်Aတွေးတွေလှပဖို့ G D A G D A Aလွမ်းပူပြင်းတယ် မီးလား Aချစ်တွေဟာဆိုးလွန်း G D A ကမ်းမရှိတဲ့Aချစ်နဲ့ ငါ့နှလုံးသား G D G D G D E ပေးထားမယ် ပေးထားမယ် ပေးထားခဲ့မယ် Aခု…Aခု… Aခု… A A Aချစ်များကို လှမ်းယူUီး လှမ်းယူUီး Solo: Gb…….
ဝေးပြီဘေဘီ တေးရေး-နိုင်းနိုင် တေးဆို-Aငဲ Key: E Dbm Gb G Emaj7 A Gbm Ab လား…….. . Dbm Gb B Aနမ်းလေးပဲ ထားခဲ့ နှစ်ယောက်သားဝေး Emaj7 A Aဆွေးများ Aပြည့်နဲ့ပေါ့ မင်းကြောင့်ရူး Gbm Ab နင်ဟာ ဒီကမ္ဘာရဲ့ Aဆုံးထိပြေးမလား ဒီိလိုငါမယုံရဲ Dbm Gb B Emaj7 ရင်မှာဒဏ်ရာတွေ Aဆိပ်တက်ခဲ့ မေးခွန်းများလည်း ဆုံးဖြတ်လိုက် A Gbm Ab B တို့နှစ်ယောက်ဝေး Aချိန်တွေ Aရည်ပျော်ကာသွားတဲ့နေ့ရောက်ရင် E Cho: Aူး ဝေးပြီဘေဘီ Aဝေးဆုံး B A E B E B စွဲမက်တဲ့ Aနမ်း မူးယစ်သွားပြီပဲ ( ပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီလား ) E B A Aူး ဘေဘီ ဘေဘီ Aဝေးဆုံး B A E ရင်မှာေAာက်မေ့တဲ့ Aိပ်မက်များ မင်းနှုတ်ခမ်းလေး Gb Ab ဒီမိုးစက်များထဲ စွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်များ ရင်မှာ နာကျင်နေလဲ မထူး ပြန်လည် မကြုံဆုံနိုင်သေးတဲ့ ခရီးများဆက်ကာ မပျော်ရွှင်နိုင်သူပါ နှလုံးသားလေးထဲထိ ရိုက်ခတ်ဆဲ ဒဏ္ဏာရီလို Aဆုံးသတ်က မလှပခဲ့ ကျိန်စာတွေကို Aခါခါဆိုဖူးသော နှုတ်ခမ်းတစ်ခုဟာ Repeat Cho: Dbm Gbm B Emaj7 A Gbm Ab လား… လား… လား… လား Dbm Gb B Emaj7 A ငါခံနိုင်ရည်မရှိ ရူးသွပ်ခဲ့ ကံကြမာရယ် မုန်တိုင်းများလည်း တိုက်ခတ်ဆဲ Gbm Ab B ကျိန်စာတွေကIU Aခါခါ ဆိုဖူးသော နှုတ်ခမ်းတစ်ခုဟာ E B E B A B A Aူး ဝေးပြီဘေဘီ Aဝေးဆုံး ရင်ခုန်တဲ့ Aနမ်း မူးယစ်သွားပြီပဲ A E B E B A E B Aူး ဘေဘီဘေဘီ Aဝေးဆုံး A မြဲတမ်းေAာက်မေ့ခဲ့ Aိပ်မက်များ နှုတ်ခမ်းလေး E B E B A B A E Aူး ဝေးပြီဘေဘီ Aဝေးဆုံး စွဲမက်တဲ့ Aနမ်း ပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီလား A E B A B E Aူး ဝေးပြီဘေဘီ ဟိုA ဝေး Aမြဲတမ်းေAာက်မေ့ခဲ့ AIပ်မက်များ နှုတ်ခမ်းလေး Fine..လား………. လား…….
AEဖြ EတးEရး-ဇ၀ါ EတးဆIU-Aငဲ Key: G Intro: ( G Gsus G C D )2 D + G GsusG မြင်ခဲ့တာ ညနှစ်ခU မင်းAလှမှာ နစ်မြUပ်ယစ်မူး C D မင်းEကြာင့်ငါAသည်းEတွရူး G Gsus လမ်းမီးEတွ ယIမ်းကဆဲ ချစ်ရတာ စIတ္တဇပဲ C D AIပ်မက်Eတွ ပြသနာပဲ Cho: F C F C F CG D D [ AIUး ဂဲလ် ရူးပြီး ငါ့ကIU ကြည့်လှည့် G ဟစ်EAာ်ဆဲ နUတ်ခမ်းများမှာ မင်းAEကြာင်းEတွပဲ Gsus G Eစာင့်ရတာ ရူးEတာ့မှာပဲ C D ဆံUးဖြတ်ပါ ဘယ်လIUလဲ G မက်Eလာက်EAာင် ဆွဲထားတာလား GsusG ပြတ်Eတာက်EAာင် ရက်စက်တာလား C D မင်းစကားEတွ လည်Eနခဲ့ F C F C F C G D D Aချစ်Eတွ Eစာင့်Eမျှာ်ရတာ ပျင်းလIU့ G AခUချစ်လIUက်Uီး Aချစ်Eလး ] Solo: ( GD Em D C G D )4Repeat Cho: & G D Em D C G D G D Em D C G D AခUချစ်လIUက်Uီး Aချစ်Eလး G D Em D C G D AခUချစ်လIUက်Uီး Aချစ်Eလး ( A E Gbm E D A E )2Aမြန်ချစ်လIUက်Uီး Eဘဘီ. Hey! Fine ..
ဟန်နီ EတးEရး-Eသ်ာဒီE၀ EတးဆIU-Aငဲ Key: E Intro: ( E A B )2 E A B Dbm B A + E A E ငယ်စU်AချIန်Eလး တIU့တEတွ ကEလးဘ၀က နှစ်လံUးသားဖူးသစ်စAရွယ် Dbm Abm A B Eမာင်နှမAရင်းEတွလIUပဲ Aတူတူဘ၀Eကျာင်းEလးA ထဲ E A E Aချစ်တဲ့ Eမျှာ်လင့်မထားဘဲ Eရာက်ရIှခဲ့ ကျIUးEပါက် ငါ့မသIစIတ်ထဲ Dbm Abm A B Bsus B ခင်စရာEကာင်းတဲ့ ဟန်နီ စIUးရွံ ဘယ်လIUEပြာရမလဲ Dbm B E Dbm B ဖွင့်ဟ ၀န်ခံဖIU့ ကြIUးစားလည်း ခက်လIU့Eနခဲ့ A B E Ab A ကျIတ်မIှတ် မျIUသIပ်ထား ခUန်Eနငါ့ရင်ထဲ Aချစ်နဲ့ ရူးသွပ်မIUက်မဲ E A B ++ Eဟး Eဟး ဟန်နီ စာနာခွင့်လွှတ်Eစချင် E A B ချစ်တဲ့ ဟန်နီ EလမUန်တIUင်းများတIUင်ခတ်ဆဲ Dbm x Abm E A EAB ဒီရင်ခUန်သံEလးများ AဆံUးသတ်ခဲ့မှာ စIUးရIမ်လIU့ ဟန်နီရယ် AချIန်ရယ်EနွမIUးEဆာင်းတIU့ Eပြာင်းသွားလည်း လွင့်Eမျာဆဲပဲ ငါ့စIတ်Eတွ ဒီရင်ခUန်သံEတွ မဆံUနIUင်Eသး Aနာဂတ် ခရီးတစ်ခUရဲ့Aထဲ ငါဟာ တစ်Eယာက်တည်း Aထီးကျန် ရွက်လွှင့်ခဲ့ ဘ၀Aတွက်ကြIUးစားရင်းနဲ့Eပါ့ Eမျှာ်လင့်မIတယ် AIပ်မက်များ ရင်မှာထင်ဟတ်ဆဲမင်းရဲ့AEကြာင်း ယUံကြည်ထား Aချစ်စIတ်Eလးများနဲ့Eပါ့ Eပွ့ပIUက်ရင်း မင်းAတွက်Eပါ့ AIUး… ရင်မှာလည်း ငါEလမူးပြီEဟ့ Aချစ်စIတ်Eတွနဲ့ xx Eဟး Eဟး ဟန်နီ ဒါEတွ မင်းသIEစချင် ချစ်တဲ့ ဟန်နီ ငါတကယ့်ကIU ကြIUးစားလIU့လာခဲ့ Dbm Abm7 E A Gbm ပြန်ဆံUနIUင်ပါ့မလား AEတွးနဲ့ ငါ့ရဲ့စIတ်ထဲ ယUံကြည်လIU့Aားခဲ Abm7 AB E ငါဟာကြ်IUးစားရင်း မင်းရဲ့Aချစ်ငါ Aရယူခဲ့ဖIU့ Solo: ( E A B )2Dbm Abm7 E A E # E ရင်မှာEလ Eမျှာ်လင့်ထားသူ မင်းAတွက်Eပါ့ ယူEဆာင်လIU့လာခဲ့ Dbm Abm7 A B ဒဏ်ရာများ Eမ့Eပျာက် ခIUလUံ ပါရEစEတာ့ E A E Aလွမ်းEမာများလည်း AားလံUးထားရစ်ခဲ့ ငါ့ရဲ့ နှလံUးသားEလး တစ်ခUA တွက် Dbm Abm A B ကြင်နာတတ်သူဟန်နီ တစ်ညလံUးမင်းရင်ထဲ E A B ## ဟန်နီ ( ခUIလUံလIUက် ပါရEစEလ ) ငါချစ်တဲ့ ဟန်နီ ( ကIUယ်တကယ့်ကIU Eမာပန်းလIU့လာခဲ့ ) ဟန်နီ ( ခIUလUံလIUက် ပါရEစEလ ) ဟန်နီ Fade Out. .
.ထပ်မဝေးဘူး တေးရေး-ကေေAတီ တေးဆို-Aငဲ Key: C Intro: ( C Am F Gsus G )2 C # Am F Gsus G ညတစ်ရေးနိုး လမင်းကြီး မြင်တော့မှ ကိုယ်ယောင်ယမ်းပြီး C Am F Gsus G Aရင်တုန်းက Aခုညမျိုး ကိုယ်ပြန်ေAာက်မေ့ Aို… ဘယ်သူမှမရှိ C Am Aချိန်တွေ နောက်ပြန်လည် Aိမ်ပြန်ရောက်ချင်တယ် F Gsus G ကြာရင်ခက်မယ် မဖြစ်သေးဘူး F Esus E Aခုတော့ ရှင်လျက်သာ Aသက်မရှိသူ Am F Gsus G Cho: ( ကြယ်စင်များ ရေတွက်လို့ Aရောက်ပြန်ခဲ့မယ် Am F Gsus G Aိပ်မက်များ ပြန်ရဖို့ ကြိုနှင့်Uီး Em Am Em Am ကံဟာ ဆန်းကြယ်တိ်ု့နှစ်Uီးကြား Aကြိမ်ကြိမ် လွဲချော်ခဲ့ပြီးသား Dm Gsus G ဒီတစ်ခါတော့ တို့နှစ်ယောက် ထပ်မဝေးဘူး G C Am F Gsus G ကိုယ့်ရဲ့ကတိနဲ့ Aချစ်တို့ယူ ) + Aမှောင်ထဲသို့ လမင်းတိုးဝင် တစ်ယောက်တည်းမို့ ကိုယ်ထင်တိုင်း Aားငယ် မဟုတ်သေးဘူး ဒါဟာ A မြဲမဟုတ်ဘူး မျှော်လင့်ချက်လည်း မကုန်သေးဘူး ++ Aချိန်တွေ နောက်ပြန်လည် Aိမ်ပြန်ရောက်ချင်တယ် ကြာရင်သိပ်ခက်တော့မယ် မဖြစ်သေးဘူး Aခုတော့ ရှင်လျက်သာ Aသက်မရှိသူ Repeat Cho: Solo: C Am F Gsus G C Am F Gsus G Repeat ++ & Cho: Am F Gsus G (စိတ်ချပါ ထပ်မဝေးဘူး )၃ Am F Gsus G Aိပ်မက်တွေ ထပ်မဝေးဘူး Am F Gsus G (စိတ်ချပါ ထပ်မဝေးဘူး )၂ Ending: Am F G C Fine.
မျှော်လင့်ခြင်း ကွင်းပြင် တေးရေး-Aငဲ တေးဆို-Aငဲ Key: G Intro: ( Em Am C B7 )2 Em Am C B7 # ဒီ ကွင်းပြင်ကြီးကို တို့ဖြတ်ဖူးတယ် Em Am Em B7 ဒီ မျက်ပင်များAပေါ် တို့နှစ်ယောက်Aတူ လျှောက်ဖူးတယ် C D G C+ ဒီကောင်းကင်ကြီးထဲ မိုးတိမ်တွေ Aမြဲပြန်သန်း Am D G B7 ကြည်နူးစရာဘ၀ပေါ့ မင်းလေးနဲ့ဟို တစ်ချိန်က Em Am Em B7 C Em C B7 တို့နှစ်UီးသားAချစ်ကို တန်ဖိုး ထားကြတယ် ## ဒီကွင်းပြင်ကြီးဟာ Aခုဆိုလွမ်းစရာ ဒီမျက်ပင်စိမ်းတွေ ခြောက်သွေ့ကာ ညိုမဲနေ ဒီကောင်းကင်ကြီးလည်း ဟိုးAရင်လို မလှတော့ဘူး ရင်ထဲမှာ Aဆွေးများ မင်းထားပစ်ကာ ထွက်သွား တို့နှစ်Uီးသား ဘ၀ဟာ ကမ္ဘာကြီး ခြားထားသလို C D G + တို့မသိနိုင်ဘူး ကံတရားရဲ့ Aင်Aားကို C D G Aဝေးဆုံး ချစ်သူတိုင်းပဲ ပြန်နီးဖို့ မျှော်လင့်နေ Em Am Aချစ်ဆုံးချစ်သူတိုင်း Aို… Aလွမ်းဆုံး ဘ၀ရှိမယ် Em Am Gb B7 Aချစ်ဟာ ကြည်နူးစရာ လွမ်းစရာ တစ်ခါဖြစ်မြဲ ++ ကိုယ်လေ စောင့်မျှော်ဆဲပါ မင်းလာမယ့်နေ့ တကယ် နားလည်မှုနဲ့ မင်းကိုယ့်ထံ ပြန်မယ့်နေ့ ကြေကွဲ စရာများနဲ့ တခြားနေရာမှာ မင်းပျော်မလား ငါလွမ်းသလိုမင်းလည်း Aမြဲတမ်းတ နေမှာပဲ မျှော် မဆုံးသောကွင်းပြင် Aရင်Aတိုင်း လျှောက်ရေAာင် Solo: C D G C D G Em Am Em Am Gb B7 Reprat ++ & C Em C Em C C E Fine .
.၈၅ မန္တEလးညများ တမ်းချင်း EတးEရး-Aငဲ EတးဆIU-Aငဲ Key:G Intro: Bm D Em Bm C Bm Bm D Em Bm Am Bm C Em F#G C Em ငါ့AIပ်မက်များ ဟIU AတIတ်Eတွဆီ လွင့်EမျာမI ဆယ်စUနှစ် Em Em F#G C DD တIU့ရဲ့မန္တEလးက Eကျာင်းEတာ် ဘယ်Eတာ့မှ မEမ့နIUင်ခဲ့ Bm D Em Bm C Bm Bm ဒီAချIန် Eရွှပြည်EAးရဲ့ ညEနခင်း စက်ဘီးEတွ Aတူစီးရင်း D Em Bm Am Bm C ပူပင်စရာ ကင်းတဲ့ ဆည်းဆာEလး AEပါင်းAသင်းEတွ စံUလင်ပြီ C D Em လွမ်းမIတယ် * (ဟIUးတUန်းက မန္တEလးညEရ C D Bm C B C D Em ဟIUးတUန်းက မန္တEလးညတIU့Eပျာ်ရင်း ဟIUးတUန်းက မန္တEလးညEရ C G/B Am D Em / C D Bm C မIUးလင်းခဲ့ AEပါင်းEဖ်ာများ ၀IUင်းဖွဲ့ရင်း / ဟIUးတUန်းက မန္တEလးညတIU့Eပျာ်ရင်း) Em G C Em Em AားလံUးEတွ့ကြခIUက် ချစ်ခင်စIတ် သီချင်းများဆIUကြရင်း Eကျာင်းသားဘ၀ရ ညEတွဟာ Eရွှမန်းနဲ့ သစ္စာEရှ့ ဂစ်တာသံEတွ ညU့်နက် စီးဆင်းEတာ့ လွတ်လပ်စွာ ဆIUညည်းရင်း ငါတIU့Eကျာင်းရဲ့ ညEတွတIUင်း Eရာင်းရင်းEတွ ဆIUတဲ့သီချင်း ( ပြီးဆံUးပြီ ) Repeat * G Em D C Bm Em D Cmaj7 AချIန်များ တEရွ့Eရွ့ စီးဆင်းခဲ့ပြီ Eန့များစွာ AE၀းဆံUး E၀းလIU့သွား G Em D C ဒီညများလည်း ပြီးဆံUးသွား ရင်ခUန်သံ Eပျာက်ဆံUးခဲ့ Bm Em Aသန့်ရှင်းဆံUး AEပျာ်ရွှင်ဆံUး Am G/B C D Em Bm Bm D ဒီဘ၀ရဲ့ညEတွ Eကျာင်းEတ်ာမှာကျန်ခဲ့ Solo: Em Bm Am Bm C Em F# G C Em Em F# G C D D ငါဟာ ကံတရားရဲ့ Eဆးစက်များ နှလံUးသား AEရာင်စွန်းထင်း Aရာရာ AရUံးAမြတ် ဆန်းစစ်ခဲ့ ငါ့ဘ၀ကIUသင်ယူရင်း C D Em C D Em ဘ၀AIပ်မက်များကနIUးလာပြီ ကြည်နူးငါ့ရင်ထဲEမာ C D Em Cmaj7 တမ်းတမIတIUင်းEပါ့ ငါ့ရင်မှာ မရIUးနIUင် ( တမ်းတတယ် ) Repeat * C G/B Am D C D Em C D ဟIUးတUန်းက မန္တEလးကIU ငါလွမ်းမI ( AEဖာ်Eတွ စံUညီEပျာ်ရင်း ) Em C B C D Em မန္တEလးကIU ငါလွမ်းမI ( AEဖာ်Eတွ စံUညီEပျာ်ရင်း ) C D Em မန္တEလးကIU ငါလွမ်းမI ( Eပျာ်ရင်း ) Intro: C D Em C D Bm Bm D C D Em C D Em Fine.
.သန်းEခါင်ယံEနာက် Eကာင်းကင်EAာက် EတးEရး-Aငဲ/ဇ၀ါ EတးဆIU-Aငဲ Key:G Intro: (Em D A Bm A)2 A Em A Em A Eနွ ထင်းရူးရIပ်Eတွ တIတ်ဆIတ်ဆဲ ခရမ်းရင့် ပန်းပွင့်တIU့ Eကြွပြန့်ကျဲ C B Em A Em A Em ခရီးAဆံUးလား AIUး… ဒီလရIပ်EAာက် နင်ရIှတဲ့Aခန်း တIမ်မIUးထဲ EမျာလIUက် A C B Em A ငါ့ဝIညာU်ရဲ့ဘ၀ AခIUးAEငွ့Aဖြစ် Eရာက်လာခဲ့မှာ Bm A Bm A နံရံEတွလUပ်ခါ ငါဟာ Eမြပြင်Eပါ် စီးဆင်းလIUက်ချIန်မှာ G A B ညရဲ့ခန်းစီးEတွ လွင့်ပါEန စU့်ပန်းAIUးများလဲကျ ငါဝင်လာပြီ Em D A / Db Cho1: သန်းEခါင်ယံEနာက် Eကာင်းကင်EAာက် Bm A ဟIUးတUန်းက ဘ၀Eတွပြန်ဆန်းသစ်ဖIU့Eပါ့ G D / Gb A AEမှာင်ညတIU့လင်းပြီ Aကြင်နာ Aချစ်တIU့လIUင်းစီး ကြIUလIUက်Eတာ့ စIမ့်စမ်းEရများလIU စီးEနEသာ ငါချစ်တဲ့ မင်းAလှတIU့ပြန်EငးEမာ ရင်မှာဝမ်းနည်းမUစIတ် ဒီဘ၀AထI ချစ်ဆဲပါ AIU… ရူးသွပ်ခဲ့မI မင်းနUတ်ခမ်းEလးများဆီ ကွဲရှရစ်Eသာ ငါ့Aနမ်းများဖန်တီး C B Em B ဘယ်လIUထIEတွ့မရEတာ့ ဟစ်EAာ်ဆမှဲာ ငါရှင်သန်ချင်တယ် Cho1: Cho2: သန်းEခါင်ယံEနာက် Eကာင်းကင်EAာက် AခUညEတာ့ ကIUယ့်ရင်ထဲ AIပ်စက်စမ်းEတာ့ ကIUယ်ဟာ Aမြဲတမ်းပဲမင်းနဲ့ Eနခွင့်မရလIU့ ကြIUလUIက်Eတာ့ AIUး… Solo: Em A Em A C B Em Em ကျIန်စာEတွပဲလား ငါဟာဒီဘ၀ မင်းနဲ့E၀းEနတာ မဆံUးEသာ ချစ်ခြင်းနဲ့ မင်းရယ်ငါ AIUး… AခUညရဲ့AဆံUးAထI ငါရှင်သန်ချင်တယ် Repeat Cho1 & Cho2 Em D A/Db Bm A သန်းEခါင်ယံEနာက် Eကာင်းကင်EAာက်…ဟူး… G D/Gb A A ငါဟာ ထIEတွ့မရEသာ မဆံUစည်းနUIင် ငါ့AရIပ်တစ်ခUEပါ့ ကြIUလIUက်Eတာ့ Em D A/Db Bm A G AIUး… Eကာင်းကင်EAာက် ဟူး…Eရး… D/Gb A A Em D A/Db ဒီညEတာ့ ငါ့ရင်မှာ AIပ်လIUက်Eတာ့ Bm A G D/Gb A A Em D A/Db ဟူ… ဟIUတUန်းကဘ၀လIU ရင်မှာ တIUးဖက်လIU့ထားမယ် ကြIUလIUက်Eတာ့ Bm A G D/Gb A B Em ဟူ… AIU AားလံUး လွန်Eမြာက်ရင် ဒီညဟာပြီးဆံUးEတာ့မယ် ကြIUလIUက်Eတာ့ Fine.
လူစီ EတးEရး-Eသ်ာဒီE၀ EတးဆIU-Aငဲ Key:D Eလှာင်ရယ်သံEတွ နားမဆံEAာင် လူစီAချIန်ကUန်ခံပြီး EဆွးEနွးလIUက် လူတကာ ငြူစူကာ မဲ့ရွဲ့တဲ့နUတ်ခမ်း GF G ဘယ်လIUထင်ထင်Eလ ဂရUမစIUက် မင်းဘ၀ကIU တည့်မတ်ပြီထား (AIUး…) E AGFE ဘယ်Eကာင်က ပIUပြီးထူးလဲ D * ထင်ရာမြင်ရာ မင်းAEကြာင်းလူစီ (ထင်ရာမြင်ရာ EပြာလIUက်ကြ) A# မဆIUင်တာEတွကIU စIတ်ဝင်စားလIU့ (ထင်ရာမြင်ရာ EပြာလIUက်ကြ) G ထင်ရာမြင်ရာ မင်းAEကြာင်းလူစီ (ထင်ရာမြင်ရာ EပြာလIUက်ကြ) A A စIတ်ဓါတ်ကIU တည့်မတ်ပြီးထား AားလံUးကIUရUပ်တယ် Eမ့ပစ်လIUက် D AချIန်EတွကUန်တယ် ငါ့Aတွက်Eတာ့ မထူးဘူး (နားနှစ်ဖက် ပIတ်ပြီးထား စIတ်ထဲEမ့လIUက်) EလကUန်ခံ ရUပ်တယ် မရှင်းနဲ့Eတာ့ (EနပါEစEလ ရှင်းမEနနဲ့) G တUI့ရင်ထဲမှာ မင်းကIUရှင်းတယ် (ယUံကြည်Eနတယ် EသချာEနတယ် AားလံUးပဲ) D ရင်မှာ AဖြူEရာင်EစတနာEတွဟာ AရIUးခံEဟ့ (ခင်မင်Eန တွယ်တာEန သံEယာဇU်ကြIUး) G + မင်းဘ၀ကIU တည့်မတ်ပြီးထား ( AIUး…) E AGFE လူတကာAမြင် ပIUပြီးEစာင်းဆဲ A လူEတွဆIUရင်Eကြာက်တယ် ကြံကြံဖန်ဖန် EပြာနIUင်လIU့ Repeat * Solo G D G A Repeat + & * A လူEတွဆIUရင်Eကြာက်တယ် ကြံကြံဖန်ဖန် EပြာနIUင်လIU့ Repeat * D C A# A# A G ရUန်းထွက်Uီး လူစီ ထားခဲ့လIUက် လူစီ A D C A# A G A D မင်းဘ၀ရဲ့ ယUံကြည်ချက် AားလံUးဖြတ်သန်းကာ Eရှ့ဆက်လIUက် Fine .
ညမီးAI်မ် EတးEရး-Aငဲ EတးဆIU-Aငဲ Key: F Intro: F Gm Dm7 F Bb C F Fsus F F Gm Dm7 F ကြည်လင်တဲ့ မIUးသားထက် Eမာ့ကြည့်လIUက်Eတာ့ Bb C F Fsus F ကြယ်စင်EတွလIUEတာက်ပ ငါ့Aလွမ်းများ F Gm Dm7 F Aချစ်ရဲ့တIမ်တIUက်Eတွ လွင့်Eမျာပြီ မင်းEလးဆီကIU Bb C F Fsus F ကIUယ်ယူEဆာင်လာခဲ့ပြီ AIပ်မက်များ Dm Pre Cho: ဒဏာရီပံUပြင်လIU မင်းသမီးလIU AIU Aချစ်Eလး Am7 Bb Csus C တIU့နှစ်Eယာက်E၀းမှာစIUး Aခက်ခဲများလည်း ရင်ဆIUင်ဖြတ်ကူးကြစIU့ Bb C F Fsus F Bb C Cho1: (ယူEတာ့ Aချစ်Eတွယူ AIUး… AားလံUးEပးချင်သူ Dm Am7 F Fsus F မင်းEလးAတွက်Eတာ့ ကIUယ်ဟာညမီးAIမ် Bb F Bb CF ဒီလUIခIUင်မာတဲ့ Aလင်းEရာင်) Aမြဲတမ်း လင်းEနသူ Gm Dm7 F Bb C F Fsus F ကြည်လင်စွာ စမ်းEချာင်းEလး စီးဆင်းသံလIU ရင်ခွင်မှာ Aချစ်များ စီးEနဆဲပဲ ကIUယ့်ဘ၀ AရာတIUင်းကIU မင်းAတွက်Eပးဆပ်ခဲ့သူ Aကြင်နာ EရစUန်တIU့ သွင်သင်ွစီးခဲ့ Cho2: (ယူEတာ့ Aချစ်Eတွယူ AIUး… AားလံUးEပးချင်သူ မင်းEလးAတွက်Eတာ့ ကIUယ်ဟာပံပIUးသူ ဒီလUIခIUင်မာတဲ့ ချစ်သူ Bb C Dm Bb C ယူEတာ့/ယူပါ Aချစ်Eတွယူ AားလံUးEပးချင်သူ) Solo: ( Dm Am7 Bb C)2 AဆံUးEတာ့ ရူးသွပ်တဲ့ ကIUယ့်Aချစ်Eတွဟာ EရလIU သွင်သွင်စီးဆင်း လIUက်စားခဲ့ AE၀းက လမင်းEရ ကIUယ့်ဘ၀ကIU EAးချမ်းEစEတာ့ Eမျှာ်လင့်Eစာင့်စားသူ Eသြာ်… E၀းEနဆဲ Repeat: Pre Cho: & Cho1: & Cho2: Ending: F Gm Dm7 F Bb C F Fine FsusF .
Em .ဂန္ထ၀င်မြောက် Aိမ်ပြန် EတးEရး-Eသ်ာဒီE၀ EတးဆIU-Aငဲ Key:G (Em) Intro: Em G D Em G D Em G D Em G D Em Em C Em AားလံUးရင်ဆIUင် ဒီမIUးသက် မUန်တIUင်းများ ကြမ်းတမ်း G D ကIUယ်ဟာ ဘာကIUမှ မEကြာက်ပြီ Em C Em ကIUယ့်ရဲ့ Eခြလှမ်း တစ်လှမ်းချင်း လှမ်းရင်းဆက် G D ကြIUးစား ရည်ရွယ်ခဲ့Eသာ လမ်းEတွ C G Am ရာဇ၀င်များ ကIUယ့်ရင်မှာ AEကာင်းဆံUး Eပးဆပ်ထားခဲ့ဖIU့ C G Am ယံUကြည်ချက် AဓIပါယ်များ ရင်ထဲ D ဒီကမ္ဘာEမြရဲ့ ခရီးဆက်မဲ့ သီချင်းEလးများနဲ့ ငါAားလံUးကIU Eပးဆပ်ခဲ့ Em C Em G D Em ပြန်လာမယ့် လမ်းEတွဆီ ( ကြIUEနEတာ့ Aချစ်ဆံUးEလး) C Em G D Em GD ကIUယ်ပြန်လာမဲ့ လမ်းEတွဆီ (ကြIUEနEတာ့ Aချစ်ဆံUးEလး) စIတ်ချထား Aချစ်Eရလှမ်းလာမယ် ကြIUးစား ကIUယ့်ရဲ့Eခြလှမ်းများဆက် နွမ်းညစ်တဲ့ စIတ်Eတွ လွှင့်ပစ်ထားခဲ့ပြီး ကIUယ့်ရဲ့ရင်မှာ AမြဲယUံကြည်ပြီးထားတဲ့ + ရာဇ၀င်သစ် မနက်ဖြန်ကIU ခံစားEပးဆပ်ထားခဲ့ပြီးရင် ကြင်သူEလးရIှရာဆီ ဒီခရီး Eမျှာ်လင့်ခြင်း AIပ်မက်များလည်း AဆံUးသတ်ခဲ့ပြီး ဂန္ဘ၀င်မြောက် သီချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ ပြန်လာမယ့် လမ်းEတွဆီ ( ကြIUEနEတာ့ Aချစ်ဆံUးEလး) ကIUယ်ပြန်လာမယ့် ဒီလမ်းဆီ (ကြIUEနEတာ့ Aချစ်ဆံUးEလး) C Em G D Em ရာဇ၀င်တွင်မယ့် Eပးဆပ်ခြင်း (ယUံကြည်Eတာ့ Aချစ်ဆံUးEလး) Solo: G D Em G D Em C Em G D Em C Em G D Repeat + C Em G D Em (ယUံကြည်Eတာ့ Aချစ်ဆံUးEလး) C Em G D ဂန္ဘ၀င်မြောက် ငါ့ရဲ့ခရီး (ကြIUEနEတာ့ Aချစ်ဆံUးEလး) Ending: Em G D Em G D Em Fine.
.လမ်းပြပါUီး EတးEရး-Eသ်ာဒီE၀ EတးဆIU-Aငဲ Key:F F C Bb C F Gm C F Dm Bb Csus C ညများရယ် မAIပ်စက်နIUင်တယ် တIတ်ဆIတ်စွာ ရင်မှာ ခံစားချက်များ F Gm C F Dm Bb Csus C AIပ်မက်Eတွ မွန်းကျပ်Eနခဲ့ ငါ့စIတ်Eတွ Eမျာလွင့်တဲ့ AခIUက်မှာ Dm F+ F G9 Bb F Csus C ငါဟာ Eကြကွစွဲာ ဟစ်Eကြွး EသဆံUးရမလား ကူညီပါ ကIUယ့်ချစ်သူEလး F Gm C Dm Bb Csus C ဘ၀ရဲ့ Eမျှာ်လင့် ရည်မှန်းချက် Aနာဂါတ် ပြIUလဲ ငါEပျာက်ဆံUးသွား F C Bb F Cho1: [ (လမ်းပြပါUီး)၂ စIတ်ဝIညာU်များ Am Dm C Gm C ( F Bb C Bb )2 AEဖြ မှန်EတွကIU Eတွ့ရIှလIU့ မင်းသIခဲ့ရင် ] နင်လမ်းပြပါUီး F Gm C F Dm Bb Csus C နာဖျားခဲ့ခြင်းများမရIှ စIတ်ဓာတ်Eတွရဲ့ Aမှန်တရားရIှတယ် F Gm C F Dm Bb Csus C ခံစား ချက်များ များစွာနဲ့ သီချင်းတစ်ပUဒ်ဆIUရင်းနဲ့ မင်းAတွက်ကွယ် Dm F+ F G9 Bb F Csus C ရင်မှာ Eလာင်ကြွမ်းစွာ Eနခဲ့ သံသယစIတ်များ မင်းကEလး ကြားသIEစချင် F Gm C Dm Bb Csus C ညU့်ရဲ့ ပIတ်ဖUန်းEနEသာ တIမ်တIUက်များ Eမှာင်မည်း ငါကျဆံUးမလား F C Bb F Am Dm Cho2: (လမ်းပြပါUီး)၂ EAးစက်တဲ့ည ဒီAEမှာင်(ချIန်)Eတွရဲ့ ထွက်Eပါက်များ C Gm C ( F Bb C Bb )2 Eတွ့ရIှမယ့်AE၀း နင်/ ဒီမှာ လမ်းပြပါUီး A Dm C ဒီသံသယာ ၀တ်Eကြွးများ လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး Bb Am Gm Csus C ဘယ်ရင်မှာ ခိုဝင်နား Solo: Ab Bb Ab Bb Ab Bb Ab Bb Ab Bb C ( F C Bb )2 F Am Dm C Gm Csus Repeat Cho1: & Cho2: F Gm C F Dm Bb Csus ညများရယ် မAIပ်စက်နIUင်တယ် တIတ်ဆIတ်စွာ ရင်မှာ ခံစားချက်Eတွ… Fine.